Lgbqq | Eyedwarha 2021
I-KASHISH TransFest ekhethekileyo kwi-International Transgender Day yokuBonakala nge-31 kaMatshi
I-KASHISH Mumbai International Queer Film Festival ibhiyozela uSuku lweHlabathi lweTransgender lokuBonakala nge-31 ka-Matshi ngenkqubo ye-intanethi yokujonga iifilimu kunye nengxoxo ebizwa ngokuba yi-KASHISH Trans * Fest.
I-Kashish Mumbai yeQueer yeQueer yeQueer yaMazwe ngaMazwe yeWave Rainbow Flag kwiKala Ghoda yoMbhiyozo woBugcisa
I-KASHISH Mumbai International Queer Film Festival, umnyhadala omkhulu we-LGBTQIA + kumazantsi e-Asia ujoyina i-Kala Ghoda yoMbhiyozo wezoBugcisa, ongomnye weminyhadala yakudala e-India, ukuzisa uluhlu olonwabisayo lwe-gay, lesbian kunye ne-transgender egxila kwiifilimu ezimfutshane kunye neqela ingxoxo.
UMyili waseMumbai uphumelela uKASHISH 2021 Wendell Rodricks Ukhuphiswano lwePost Design
Ophumelele uKASHISH 2021 Wendell Rodricks Poster Design Contest kwi-12 ye-KASHISH Mumbai International Queer Film Festival ityhilwe namhlanje-umyili we-graphic wase-Mumbai u-Ajoy Kumar Das uchongwe ophumeleleyo ngu-Jérôme Marrel, umyeni ka-Wendell Rodricks ongasekhoyo, owayelilungu lejaji .
Ukusuka ku-Angelina Jolie ukuya ku-Amber Heard, iinkwenkwezi ezili-9 obungazi ukuba ziBufanasini okanye amaBinixual
Ukwamkela isini kunye nokuzibandakanya kwezesondo ayisiyonto imbi. Umntu kufuneka ayazi kwaye ayamkele into ebenza ukuba bazive bonwabile kwaye bephila. Nazo ke ezi nkwenkwezi. Funda malunga nazo.
Isibini esitshatileyo esivela eIndiya nasePakistan silungisa yonke imiqobo, iphumelele iintliziyo
Iifoto ezithandekayo ze-Sundas Malik kunye no-Anjali Chakra eNew York, bathathe i-intanethi ngoqhwithela. Esi sibini sabantu besini esifanayo sesamazwe amabini ahlukeneyo, i-Indiya ne-Pakistan. Abasebenzisi beendaba zosasazo bathululela kumagqabantshintshi othando avela kwihlabathi liphela.
Usuku lwaMazwe ngaMazwe lwe-AXXUMX 2021: Yazi ukubaluleka kwale mini
USuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBasetyhini kwiXesha lethu lokuziphatha ngokwesini sisikhumbuzo esiwela rhoqo ngonyaka nge-6 ka-Epreli. Usuku luqaqambisa inkangeleko yesondo yabantu abathandanayo ngokwesini, ngokwesini kunye nesini. Kwakukho ngomhla wama-31 kuJanuwari ngo-2021, xa isigqibo sokugcina uSuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBasetyhini
USuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBasetyhini kwiXesha lethu lokuziphatha ngokwesini ngumsitho owenzeka rhoqo ngonyaka nge-6 ka-Epreli. Usuku luqaqambisa inkangeleko yesondo yabantu abathandanayo ngokwesini, ngokwesini kunye nesini. Kwakukho ngomhla wama-31 kuJanuwari ngo-2021, xa isigqibo sokugcina uSuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBasetyhini
Ngaba ikhala lilungile kulusu olunamafutha
Ungalufumana njani unyango olululo lolusu ekhaya
wawunjani umbala wesikhumba we-draupadi kwi-mahabharat
ulusu olwenziwe ekhaya ulusu olunamafutha
ukumisa njani ukuhlwa kwesidoda